Endikufundileyo kwi-CloudCamp | Martech Zone
Into endiyifundileyo kwiCloudCamp
Lwesine, ngoFebruwari 5, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Nangona ilibazisekile (iveki e-1) ngenxa yekhephu kwiveki ephelileyo, CloudCamp Indianapolis wemka engakhange abambe nganto ngobu busuku. Ukuba ukhona hayi ukusuka e-Indianapolis - kuya kufuneka uqhubeke nokufunda. ICloudCamp intsha kwaye ibanjelwe kwizixeko ezikhulu kwihlabathi liphela. Enkosi kumbandela wobuchwephesha kunye nobunkokeli kushishino Luhlaza, siqhube umcimbi ophumeleleyo kwalapha eIndy.
Ukuba uyazibuza yintoni i-Cloud Computing, IBluelock ibonelele ngengxoxo yokuchaza eli gama lingenangqondo.
Ilifu elisebenza e-Indianapolis?
I-Indianapolis ifumana ingqalelo kuzwelonke nakumazwe aphesheya ngenxa yexabiso eliphantsi, elizinzileyo elinxulunyaniswa namandla kunye nearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba- zizinto ezimbini ezinkulu ekumiseni iindleko zokubamba. Ukongeza, imozulu yethu iqinile kwaye sikwindlela ekudibana kuyo yonke imigca emikhulu ye-Intanethi eMntla Melika. Ukuba ubamba isicelo sakho kwindawo yokugcina idatha yaseCalifornia ngoku-unokufuna ukujonga!
IBlueLock yiNkokeli yaMazwe ngaMazwe kwi-Cloud Computing
Ndimele ndinyaniseke, kokukhona ndisiva uPat O'Day ethetha, ndoyikisa ngakumbi malunga nokuba ingakanani loo mfo ayaziyo malunga necomputer yelifu, ikhompyutha eluncedo, ikhompyutha yegridi, ulawulo lwendawo yokugcina idatha, ubuGcisa, iVMWare… uyayibiza ngegama kwaye loo mfo uyazi yiyo. Uthethile ngokuthambileyo, unobabalo, kwaye unamandla angaqhelekanga okuthetha kuthi bantu bangabenzi bobuchwephesha kolu shishino!
Andibaphathi abanye kwiqela! UJohn Qualls noBrian Wolff ngabahlobo abakhulu kodwa ngokuhlwanje uPat ebesematheni.
Qhawula iiseshini: Ukwehla kwesicelo
Enye yeeseshoni endiye kuzo yayikhokelwa nguEd Saipetch. U-Ed wasebenza e-Indianapolis Star xa ndenzayo ndaza ndenza isikali kunye nokusetyenziswa kwephephandaba. Wayekhupha umlingo emva koko - wayenemithombo encinci kunye neemfuno ezininzi zokwakha izicelo zeshishini kuhlahlo-lwabiwo mali oluncinci.
U-Ed wabelane ngetoni malunga nezixhobo ezitsha ezinokusetyenziselwa uvavanyo lomthwalo oluzenzekelayo kunye novavanyo lwesantya sesicelo kunye nengxoxo esempilweni yoyilo kunye nokuba kuthetha ntoni ngokukhula ngokuthe nkqo kunye nokukala ngokuthe tye. Ndiyonwabele kakhulu le ncoko.
Ukwamkelwa ngenene ligama lobugcisa?
[Faka i-Beavis kunye ne-Butthead)
Sade saxoxa ukugcuma, igama endandiligcinele kuphela uburharha bokuhlambela endikubonileyo kumdlalo bhanyabhanya kube kanye. Ukugcoba Ngokwenyani yindlela yokulinganisa usetyenziso lwakho, endaweni yoko kubarbarically, ngokudala iikopi zedatha entsha kunye nokutyhala abathengi kwiindawo ezahlukeneyo zokunciphisa iintlungu zokubetha kwindawo enye ngalo lonke ixesha.
Phula iSeshini: I-ROI yamafu
Iindleko ezinxulunyaniswa nekhompyuter yelifu zinokwahluka kakhulu-ukusuka kungabikho nto ukuya kwiinkqubo ezibekwe esweni kakhulu kwaye zikhuselwe ngamandla. Incasa yeBlueLock sisixhobo njengeNkonzo- apho unokukhupha zonke iintloko zeZiseko zophuhliso kwiqela labo ukuze ukwazi ukugxila ekuhanjisweni nasekukhuleni!
Ndingene kwincoko ye-Return on Investment ndicinga ukuba siza kuba nesifundo esinzulu kakhulu kuhlalutyo lwezixhobo eziyimfuneko kulwakhiwo lwendabuko ngokuchasene nelifu. Endaweni yoko, URobby Slaughter Khokele ingxoxo ebalaseleyo yolwazi kunye nobubi bobabini kwaye wathetha ngokunciphisa umngcipheko.
Umngcipheko linani uninzi lweenkampani olunokuthi lubeke amanani athile kulo… liza kubiza malini xa ungakwazi ukukhula ngokukhawuleza? Kuza kubiza malini ukuba uye wehla kwaye ufuna ukubuyisela imeko-bume ehlaziyiweyo? Ezi ndleko, okanye ilahleko yengeniso, inokugubungela ii-nickels kunye ne-dimes ehlaziyiweyo kuthelekiso lwesiko.
Umbulelo okhethekileyo kwi-BlueLock yomnyhadala omangalisayo wokubanjwa (i-pun eyenzelweyo). Andikwazi kulinda ukuba ndibuyele ekhaya kunye neblogi malunga ne-sharding.
tags: ilifuukhomyutha yamafuilaphu
Ayisiyonto ilula kubathengisi
Feb 5, 2009 ngo-10: 31 AM
Side saxoxa ngokugcwala, igama endandiligcinele uburharha bokuhlambela endakha ndawubona kumdlalo bhanyabhanya kanye.
Ndiye ndahleka kakhulu, I kinda sharded kancinci.
Kwakhona, [Faka iBeavis kunye neButthead)
Feb 5, 2009 ngo-10: 47 AM
Enkosi ngeplagi, Doug! I-Cloudcamp yayingumnyhadala omkhulu.
Bendingekho kwintetho ka-Ed malunga nokucheba, kodwa bendicinga ukuba ndiza kucacisa ukuba le ndlela ayisiyiyo "eyolunya." Ngokwesiqhelo, u-sharding ubhekisa ekwaphuleni ugcino lwedatha yakho ecaleni kwemida yesicelo esithile. Umzekelo, ukuba idatha evela kumthengi omnye ayikhe ichaphazele idatha evela komnye umthengi, ungahlulahlula indawo yakho yokugcina kwindawo ezimbini: i-AL kunye neMZ.
Ukugcina abafana (njengo-Ed) olu luhlobo lwesisombululo esingafunekiyo, kuba oko kuthetha ukuba kuya kufuneka ugcine oovimba beenkcukacha ezininzi ezakhiwe ngendlela efanayo. Kodwa yindlela entle yokwandisa intsebenzo ngaphandle kokongeza iindleko ezininzi!
Feb 5, 2009 ngo-7: 47 PM
I-Crude ingaba ligama elingcono, uRobby. Ingcaciso enkulu-sisisombululo esisebenzayo, yinto nje yamandla obukrelekrele.
Feb 6, 2009 ngo-11: 36 AM
"Brute force" ichanekile. Kodwa uyazi isaci sakudala esithi: “Ukuba ubukrelekrele abusebenzi, mhlawumbi awusebenzisi ngokwaneleyo!”